Vokatry ny fitokonan’ny mpampianatra : Mangataka ny hanao fanadinana mitokana ireo sekoly tsy miankina -
AccueilRaharaham-pirenenaVokatry ny fitokonan’ny mpampianatra : Mangataka ny hanao fanadinana mitokana ireo sekoly tsy miankina
12/07/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mbola ankamantatra hatramin’ny androany na ho tanteraka na tsia ireo fanadinam-panjakana toa ny CEPE, BEPC, BACC amin’ity taom-pianarana 2016- 2017 ity. Lasa lavitra mantsy ny fitakian’ireo mpampianatra mivondrona anaty sendika, ary miha miitatra hatrany ny fotoana very tsy hianaran’ireo mpianatra. Ny fanadinana araka ny tetiandro nomen’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena anefa efa miha manakaiky. Noho io antony io dia maro ireo hevitra mifamahofaho momba ity fanadinam-panjakana ity. Nilaza mantsy ny fivondronan’ireo sekoly tsy miankina fa tokony hitady hevitra dieny izao ny minisitera mba tsy hisian’ny taona fotsy ka tsy hahatanteraka ireo fanadinana. Ny sekoly tsy miankina raha teo niezaka nanohy ny fampianarana, na dia teo aza ny fanakorontanana nataon’ireo mpanao politika teto amin’ny firenena. Fatiantoka ho azy ireo araka izany raha toa ka tsy ho tanteraka ireo fanadinam-panjakana, satria sady lany vola ny ray aman-drenin’ny mpianatra tamin’ny saram-pianarana, no diso fanantenana ihany koa ireo mpianatra tonga amin’ireny kilasy hanala fanadinana ireny.
Nilaza ihany koa etsy ankilan’izay ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena Horace Gatien fa tsy hihemotra akory ireo daty efa nofaritana fa hanaovana ny fanadinam-panjakana amin’ity taom-pianarana ity. Hisy araka izany ny fepetra horaisina entina hanatanterahana izany raha ny fanazavany. Misavorovoro araka izany ny sain’ireo mpianatra sy ny Ray aman-dReny manoloana izao zava-misy izao. Mipetraka ihany koa ny ahiahy, ny mety ho lanjan’ny mari-pahaizana hivoaka ho an’ireo izay ho afaka fanadinana. Raha toa mantsy ka hotanterahina ny soso-kevitr’ireo fikambanan’ny sekoly tsy miankina ny amin’ny tokony hanaovan’izy ireo fanadinana manokana, dia tsy maintsy hanatanteraka ny azy ihany koa ny fanjakana aorian’izay. Raha ity tranga ity no hiseho, dia azo antoka fa tsy hisy lanjany ny mari-pahaizana hivoaka amin’ity taom-pianarana ity. Anisan’ny fepetra ho raisin’ny minisitera ihany koa ny hoe ireo mpampianatra vonona hiasa no hamita ireo fanadinana rehetra, dia avela hanohy ny fitokonany ireo mpitokona. Mbola mametra-panontaniana ihany ny Ray aman-dRenin’ny mpianatra hoe hisy filaminany ve ny fanatanterahana ny fanadinana amin’izany? Tandindonin-doza tanteraka araka izany ireo fanadinam-panjakana amin’ity taom-pianarana 2017-2018 ity noho ny fitokonana ataon’ireo mpampianatra sasany.
Ho fantatra amin’ity andro ity aorian’ ny antsapaka tontosaina etsy amin’ny biraon’ny CENI Nanisana, ny laharan’ireo kandidà anaty bileta tokana. Hiara- hiasa amin’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana, handray anjara amin’ny fanomanana fifidianana ihany ...Tohiny
Claudine sy Lalao : Mpanavakavaka ny Bianco